Ianao koa, tia anao Jesosy ! (Toi aussi, Jésus t'aime !)
…Mpiasam-panjakana ambony ianao, lehibe, tale, tompon'andraikitra ambony nahazo toerana tamin'ny alalan'ny famosaviana, fanapoizinana, fosafosa, lainga, taratasy tsy misy sonia: nihetraketrahanao ny olona rehetra mba hahatraranao ny zava-kendrenao; ary ankehitriny dia eo am-pelatananao ity taratasy ity: aoka ho fantatrao fa tsy kisendrasendra izany. Milaza aminao Jesoa fa na dia teo aza ireo zava-dratsy vitanao ireo, dia tia anao koa Izy. Avy namaky ireo andàlana vitsivitsy ireo ianao, ary gaga raha nahita fa na dia eo aza ny toerana misy anao sy ny fitondrantena ratsinao, dia tia anao koa i Jesoa. Henoy àry izay lazain'ny Mpamonjinao anao : “Tsy ny finaritra no mila mpanao fanafody, fa ny marary. Tsy tonga hiantso ny marina Aho fa ny mpanota” (Marka 2:17). Azonao an-tsaina ve izany? Tonga ho an'ny olona tahaka anao i Jesoa. Hitanao! misy làlan-kivoahana ianao, tsy iza izany làlana izany fa i Jesoa.
…Hilaza angamba ianao fa vahiny amin'ny firenen'ny Isiraely izay nomen'i Jesoa ireo teny fampaherezana ireo: Afrikana ianao, na avy any Azia, na Eoropeana... aoka ho fantatrao anefa fa ho anao koa ny tenin'ny Tompo, ary henoy ange ny fanohizany ny teniny aminao e: “Mijere Ahy, dia ho voavonjy ianareo, ry vazan-tany rehetra! fa Izaho no Andriamanitra, ka tsy misy hafa” (Isaia 45:22). Mihamazava aminao ve? Hoy ianao hoe vita ny aminao, nampijaly loatra ny mpiara-belona aminao ianao, nanapotika fíainana maro ianao, ary mihevitra ianao fa tsy misy tokony hifampiraharahanao amin'Andriamanitra intsony. Niteny an'izao sy izao ianao noho ny fahotanao. Kanefa i Jesoa milaza aminao hoe : “Anio, raha hihaino ny feoko ianareo, aza manamafy ny fonareo” (Hebreo 4:7).
Eo an-tananao ity taratasy ity, aoka ho fantatrao fa ny “anio”-nao izany, ary Andriamanitra miteny hoe: aza manamafy ny fonao. Ho famaranana, ny Fanahy Masina dia mbola manome anao izao hafatra izao : “Hataontsika ahoana no fandositra raha tsy mitandrina izao famonjena lehibe izao isika?” (Hebreo 2:3). Ry sakaizako, efa fantatrao àry fa tia anao Andriamanitra, fantatrao sahady fa Jesoa Zanany dia eo hamonjy anao. Tsy mba ao anatin'ny tsy fahalalana intsony ianao, te hampahiratra ny masonao Andriamanitra amin'ny alalan'ity taratasy ity, ka miteny aminao hoe: “Fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao: nomeny ny Zananilahy Tokana, mba tsy ho very izay rehetra mino Azy, fa hanana fiainana mandrakizay” (Jaona 3:16). Noho izany dia manoloana safidy roa ianao izao: mino ka ho voavonjy na tsy mino ka ho voaheloka. Eny, manoro mazava tsara ny làlan-kombana Andriamanitra noho ny fahamoram-pony lehibe. Hoy Izy, “Efa nataoko teo anoloanao ny fiainana sy ny fahafatesana, ary ny fitahiana sy ny fanozonana; koa mifidiana ny fiainana mba ho velona ianao” (Deoteronomia 30:19). Te hihaino an'Andriamanitra ve ianao? Sa kosa, toy ny nolazain'ny Apostoly Paoly hoe “hamavoinao ny haren'ny fahamoram-panahiny sy ny fandeferany ary ny fahari-pony, satria tsy fantatrao fa ny fahamoram-panahin'Andriamanitra dia mitaona anao hibebaka? Fa ny ditranao sy ny fonao tsy mibebaka no iraketanao fahatezerana ho anao amin'ny andro fahatezerana sy fampisehoana ny fitsarana marin'Andriamanitra” (Romana 2:4-5). Voasoratra ihany koa hoe:
“Fa ankehitriny Andriamanitra dia mandidy ny olona rehetra amin'izao tontolo izao hibebaka, satria lzy efa nanendry andro iray, izay hitsarany izao tontolo izao” (Asan'ny Apostoly 17:30-31).
Mitaona anao miaraka amin'ny Apostoly Paoly izahay: “Solon'i Kristy izahay ka mangataka indríndra aminareo hoe: mihavàna amin'Andriamanitra anie ianareo” (2 Korintiana 5:20) dieny mbola tsy tara loatra.
Raiso ny fampíhavanana atolotr'Andriamanitra anao: mibebaha, ekeo ny maha-mpanota mendrika hiharan’ny fitsarana marin’Andriamanitra anao, nefa minoa koa fa tia anao i Jesoa ary nanolotra ny tenany ho anao. Niaretany teo amin’ny hazofijaliana ny fitsarana tokony ho nozakainao noho ireo otanao marobe, mba hamelan’Andriamanitra anao. Nahatsapa tena ilay jiolahy nohomboana teo anilan’i Jesoa fa valin’ny otany izao ihantonany eo amin’ny hazo fijaliana izao. Kanefa dia nijery an’i Jesoa tamim-pinoana izy ka nilaza taminy hoe: “Jesoa ô, tsarovy aho”. Teo noho eo ihany i Jesoa dia namaly azy hoe: “Anio no hihaonanao amiko any Paradisa” (Lioka 23:41-43).
Eny, milaza amintsika ny Baiboly hoe: “Koa ankehitriny dia tsy misy fanamelohana ho an’izay ao amin’i Kristy Jesoa” (Romana 8:1). “Izay rehetra nandray Azy dia nomeny hery ho tonga zanak’Andriamanitra” (Jaona 1:12), ary tsy misy na inona na inona, hahasaraka antsika amin’ny fitiavan’Andriamanitra izay ao amin’i Kristy Jesoa Tompontsika (Romana 8:39).
“Izany no nosoratako aminareo, izay mino ny Anaran’ny Zanak’Andriamanitra, mba ho fantatrareo fa manana fiainana mandrakizay ianareo” (1 Jaona 5:13).